မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြင်ရမယ့် ရုပ်ရှင် (၃) ကား - For her Myanmar
ကိုယ်ကြည့်ဖူးတာ ဘယ်နှစ်ကားလောက်ပါလဲ ကြည့်ကြည့်နော်..
ယောင်းဟာ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ နာမည်ကြီးမင်းသားကြီး Tom Hanks ကို သိနေမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ အသက် (၆၂) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီးဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် သူ့ရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး အနုပညာထဲမှာပဲ နှစ်မြှုပ်ထားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အော်စကာဆုနှစ်ဆု နဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုလေးဆု ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး သူရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းလိုလို အော်စကာအတွက် တစ်ပေးခံရသူပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီမင်းသားကြီး ဘယ်လောက်တော်လဲ သိကြပြီပေါ့နော်။ Tom Hanks ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ Stella အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေကို ယောင်းတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Forrest Gump ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ရည်ခပ်နိမ့်နိမ့် လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ ခပ်အေးအေးနေတတ်ပြီး စိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့ သူ့ဘဝမှာ ဂရုစိုက်တာဆိုလို့ သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jenny တစ်ယောက်ပဲ ရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမြဲပြဿနာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Jenny အတွက်တော့ Forrest ဟာ ခဏတာ ခိုလှုံရာ ရင်ခွင်တစ်ခုပါပဲ။
Jenny ကြောင့် Forrest ဘဝမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ Jenny ကကော Forrest အနားရောက်လာမှာလားဆိုတာကတော့ ….
ကြာချိန် (၂)နာရီ (၂၂) မိနစ်ရှိပြီး IMDb rating 8.8 ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Tom Hanks ကို အော်စကာဆုတစ်ဆု ဆွတ်ခူးစေနိုင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒီကားထဲမှာ Stella အကြိုက်ဆုံးစကားလေးကတော့ Forrest ရဲ့အမေဖြစ်သူပြောတဲ့ “Life is likeabox of chocolates. You never know what you’re gonna get – ဘဝဆိုတာ ချောကလက်ဘူးတစ်ဘူးလိုပဲ.. ကိုယ် ဘာအရသာစားရမလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။
Related Article >>> ဖက်ရှင်ချစ်သူ ယောင်းယောင်းတို့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင် (၅) ကား
သေမိန့်ကျထားတဲ့ ထောင်သားတွေကို စောင့်ရတဲ့ အကျဉ်းထောင်လုံခြုံရေး Paul Edgecomb အဖြစ် Tom Hanks က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ John Coffey ကတော့ လူမမည် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကို သတ်မှုနဲ့ သေမိန့်ကျထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မှာ သာမန်လူတွေမှာ မရှိတဲ့ သဘာဝလွန်စွမ်းအားတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သေခါနီးလူတစ်ယောက်ဆီက ရောဂါတွေကို စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အကောင်းပတိပြန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းအားပါ။
Paul ဟာ John နဲ့ စကားပြောကြည့်ရင်း John ဟာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကြီးမားတဲ့ လူမည်းတစ်ယောက်ပေမဲ့ ယင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတောင် အန္တရာယ်မပေးတဲ့လူတစ်ယောက်မှန်း သိလာရတဲ့အခါမှာ ညီမနှစ်ယောက်ကို တကယ်သတ်ခဲ့တာ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ Paul အနေနဲ့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား။ John ကော ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ … IMDb 8.5 ရရှိထားပြီး ကြာချိန် (၃)နာရီ (၅)မိနစ်ရှိပါတယ်။ Stella ကို မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျစေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက တစ်ကားမို့ ယောင်းတို့ကိုလည်း မျက်ရည်ကျစေချင် အဲလေ.. လက်မလွတ်စေချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါပဲလို့…
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ Walt Disney Pictures က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Mary Poppins ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် Stella တို့အဘွားခေတ်က သိပ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့။ Stella ရုပ်ရှင်စကြည့်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ အဲ့ဇာတ်ကားထွေလာကို မြင်ပြီး ကြည့်ချင်ပါတယ်ဂျီကျလို့ အိမ်ကမရမက ရှာပေးခဲ့ရတဲ့ကားပါ။ အဲ့လိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၃ မှာ Saving Mr Banks နာမည်နဲ့ prequal ပြန်ရိုက်တဲ့အပြင် Tom Hanks လည်းပါတယ်ဆိုတော့ ပျော်ပြီလေ။
ဒီကားမှာတော့ Tom Hanks က Disney ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဖခင်ကြီး Walt Disney အဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။
Mary Poppins စာအုပ်တွေရဲ့ ကလောင်ရှင် P.L Travers ဟာ Mary Poppins စာအုပ်တွေကို ဘယ်သူ့အပေါ်မှာ အမှီပြုပြီး ရေးခဲ့တာလဲ?
Walt Disney အနေနဲ့ကော ဒီစာအုပ်တွေကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ရဖို့ ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရလဲ?
ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာကော P.L Travers မျှော်မှန်းထားတဲ့ Mary Poppins ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတွေ ဖန်တီးခဲ့ရလဲ?
Mr Banks ဆိုတာကကော လက်တွေ့မှာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
ဆိုတာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ကြာချိန် (၂) နာရီ (၅) မိနစ်ရှိပြီး IMDb 7.5 ရရှိထားပါတယ်။
Stella ငယ်ငယ်ထဲက Tom Hanks ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ပြီး ကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ ကားတိုင်းမှာ သူဘယ်လောက်ထိ ကြိုးစားထားလဲဆိုတာ မြင်နေရပါတယ်။ တကယ်တော့Tom Hanks က Stella အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Da Vinci Code, Big, Angels and Demons စတဲ့ နောက်ထပ် သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ Tom Hanks ဟာ Toy Story ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း ကောင်းဘွိုင်ရုပ်လေး Woody နေရာကနေ အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။
ယောင်းတို့ကော Stella ပြောပြပေးထားတဲ့ Tom Hanks ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဘယ်နှစ်ကားကြည့်ပြီးကြပြီလဲ?
ကိုယျကွညျ့ဖူးတာ ဘယျနှဈကားလောကျပါလဲ ကွညျ့ကွညျ့နျော..
ယောငျးဟာ ရုပျရှငျခဈြသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ နာမညျကွီးမငျးသားကွီး Tom Hanks ကို သိနမှော ကြိနျးသပေါပဲ။ အသကျ (၆၂) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ မငျးသားကွီးဟာဆိုရငျတော့ဖွငျ့ သူ့ရဲ့ သကျတမျးတဈလြှောကျလုံး အနုပညာထဲမှာပဲ နှဈမွှုပျထားတယျလို့ ပွောရမှာပါ။ အျောစကာဆုနှဈဆု နဲ့ ရှကေမ်ဘာလုံးဆုလေးဆု ရရှိထားသူဖွဈပွီး သူရဲ့ရုပျရှငျကားတိုငျးလိုလို အျောစကာအတှကျ တဈပေးခံရသူပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီမငျးသားကွီး ဘယျလောကျတျောလဲ သိကွပွီပေါ့နျော။ Tom Hanks ရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့ထဲကမှ Stella အကွိုကျဆုံးရုပျရှငျတှကေို ယောငျးတို့အတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျနျော…
ဒီဇာတျကားကတော့ Forrest Gump ဆိုတဲ့ ဉာဏျရညျခပျနိမျ့နိမျ့ လူတဈယောကျအကွောငျးပါ။ ခပျအေးအေးနတေတျပွီး စိတျကောငျးစတေနာရှိတဲ့ သူ့ဘဝမှာ ဂရုစိုကျတာဆိုလို့ သူ့ရဲ့ငယျခဈြဦးဖွဈတဲ့ Jenny တဈယောကျပဲ ရှိတာပါ။ ဒါပမေဲ့ အမွဲပွဿနာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ Jenny အတှကျတော့ Forrest ဟာ ခဏတာ ခိုလှုံရာ ရငျခှငျတဈခုပါပဲ။
Jenny ကွောငျ့ Forrest ဘဝမှာ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ၊ Jenny ကကော Forrest အနားရောကျလာမှာလားဆိုတာကတော့ ….
ကွာခြိနျ (၂)နာရီ (၂၂) မိနဈရှိပွီး IMDb rating 8.8 ရရှိထားတဲ့ ရုပျရှငျတဈကားဖွဈပါတယျ။ Tom Hanks ကို အျောစကာဆုတဈဆု ဆှတျခူးစနေိုငျခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျကားဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဒီကားထဲမှာ Stella အကွိုကျဆုံးစကားလေးကတော့ Forrest ရဲ့အမဖွေဈသူပွောတဲ့ “Life is likeabox of chocolates. You never know what you’re gonna get – ဘဝဆိုတာ ခြောကလကျဘူးတဈဘူးလိုပဲ.. ကိုယျ ဘာအရသာစားရမလဲဆိုတာ ဘယျတော့မှမသိနိုငျပါဘူး” ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။
Related Article >>> ဖကျရှငျခဈြသူ ယောငျးယောငျးတို့ မဖွဈမနေ ကွညျ့ထားသငျ့တဲ့ ရုပျရှငျ (၅) ကား
သမေိနျ့ကထြားတဲ့ ထောငျသားတှကေို စောငျ့ရတဲ့ အကဉျြးထောငျလုံခွုံရေး Paul Edgecomb အဖွဈ Tom Hanks က သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ John Coffey ကတော့ လူမမညျ ညီအဈမနှဈယောကျကို သတျမှုနဲ့ သမေိနျ့ကထြားတဲ့ လူတဈယောကျပါ။ သူ့မှာ သာမနျလူတှမှော မရှိတဲ့ သဘာဝလှနျစှမျးအားတဈခု ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သခေါနီးလူတဈယောကျဆီက ရောဂါတှကေို စုပျထုတျပေးနိုငျပွီး အကောငျးပတိပွနျဖွဈစနေိုငျတဲ့ စှမျးအားပါ။
Paul ဟာ John နဲ့ စကားပွောကွညျ့ရငျး John ဟာ ကိုယျလုံးကိုယျထညျကွီးမားတဲ့ လူမညျးတဈယောကျပမေဲ့ ယငျကောငျလေးတဈကောငျကိုတောငျ အန်တရာယျမပေးတဲ့လူတဈယောကျမှနျး သိလာရတဲ့အခါမှာ ညီမနှဈယောကျကို တကယျသတျခဲ့တာ ဟုတျရဲ့လားဆိုတာ မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ Paul အနနေဲ့ အမှနျတရားကို ဖျောထုတျနိုငျမှာလား။ John ကော ဘယျလို ဖွဈသှားမှာလဲဆိုတာကို စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားတဈကားပါပဲ … IMDb 8.5 ရရှိထားပွီး ကွာခြိနျ (၃)နာရီ (၅)မိနဈရှိပါတယျ။ Stella ကို မကျြရညျပေါကျပေါကျကစြတေဲ့ ရုပျရှငျတှထေဲက တဈကားမို့ ယောငျးတို့ကိုလညျး မကျြရညျကစြခေငျြ အဲလေ.. လကျမလှတျစခေငျြတဲ့ ရုပျရှငျတဈကားပါပဲလို့…
၁၉၆၄ ခုနှဈမှာ Walt Disney Pictures က ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Mary Poppins ရုပျရှငျဟာဆိုရငျတော့ဖွငျ့ Stella တို့အဘှားခတျေက သိပျကိုနာမညျကွီးခဲ့တာပေါ့။ Stella ရုပျရှငျစကွညျ့တတျတဲ့အရှယျမှာ အဲ့ဇာတျကားထှလောကို မွငျပွီး ကွညျ့ခငျြပါတယျဂြီကလြို့ အိမျကမရမက ရှာပေးခဲ့ရတဲ့ကားပါ။ အဲ့လိုကွိုကျခဲ့တဲ့ရုပျရှငျကို ၂၀၁၃ မှာ Saving Mr Banks နာမညျနဲ့ prequal ပွနျရိုကျတဲ့အပွငျ Tom Hanks လညျးပါတယျဆိုတော့ ပြျောပွီလေ။
ဒီကားမှာတော့ Tom Hanks က Disney ကာတှနျးရုပျရှငျတှရေဲ့ ဖခငျကွီး Walt Disney အဖွဈ ပါဝငျအားဖွညျ့ထားပါတယျ။
Mary Poppins စာအုပျတှရေဲ့ ကလောငျရှငျ P.L Travers ဟာ Mary Poppins စာအုပျတှကေို ဘယျသူ့အပျေါမှာ အမှီပွုပွီး ရေးခဲ့တာလဲ?
Walt Disney အနနေဲ့ကော ဒီစာအုပျတှကေို ရုပျရှငျရိုကျခှငျ့ရဖို့ ဘယျလိုကွိုးပမျးခဲ့ရလဲ?
ရုပျရှငျရိုကျတဲ့အခါမှာကော P.L Travers မြှျောမှနျးထားတဲ့ Mary Poppins ဖွဈအောငျ ဘယျလိုတှေ ဖနျတီးခဲ့ရလဲ?
Mr Banks ဆိုတာကကော လကျတှမှေ့ာ ဘယျသူဖွဈမလဲ?
ဆိုတာတှကေို တှရေ့မှာပါ။ ကွာခြိနျ (၂) နာရီ (၅) မိနဈရှိပွီး IMDb 7.5 ရရှိထားပါတယျ။
Stella ငယျငယျထဲက Tom Hanks ရဲ့ ရုပျရှငျကားတှကွေညျ့ပွီး ကွီးပွငျးလာတာဆိုတော့ ကားတိုငျးမှာ သူဘယျလောကျထိ ကွိုးစားထားလဲဆိုတာ မွငျနရေပါတယျ။ တကယျတော့Tom Hanks က Stella အကွိုကျဆုံးရုပျရှငျမငျးသားကွီးတှထေဲက တဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ Da Vinci Code, Big, Angels and Demons စတဲ့ နောကျထပျ သူ့ရဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါသေးတယျ။ Tom Hanks ဟာ Toy Story ကာတှနျးရုပျရှငျတှမှောလညျး ကောငျးဘှိုငျရုပျလေး Woody နရောကနေ အသံသရုပျဆောငျအဖွဈ ပါဝငျထားပါသေးတယျ။
ယောငျးတို့ကော Stella ပွောပွပေးထားတဲ့ Tom Hanks ရဲ့ရုပျရှငျတှထေဲက ဘယျနှဈကားကွညျ့ပွီးကွပွီလဲ?
Tags: flims, movie reviews, Movies, tom hanks
For Her Myanmar မှ Singles' Night Event ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်
ယောင်းဘယ်တော့မှ သတိထားမိမှာ မဟုတ်တဲ့ မျက်လုံးကျန်းမာရေး လျှို့ဝှက်ချက် (၇)ခု
Stella February 14, 2019
Christina Rosy March 8, 2019
ယောင်းကို မျက်ရည်ခြူမယ့် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၃) ကား
Stella February 28, 2019